यस्ता व्यक्तीले खाेल्न सक्छन् पासवर्ड बिनै अरूकाे फेसबुक | Makalukhabar.com
यस्ता व्यक्तीले खाेल्न सक्छन् पासवर्ड बिनै अरूकाे फेसबुक
असार २५ । तपाईंले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड आफूलाई मात्र थाहा छ, म मात्र खोल्न सक्छु भन्ने धारणा पाल्नुभएको छ भने तपाई गलत धारणामा हुनुहुन्छ । तपाईं बाहेक पनि अरु कोहीले तपाईंको फेसबुक खोल्न सक्छन् ।
के तपाईंले कहिल्यै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ की तपाईंलाई मात्र पासवर्ड थाहा भएको तपाईंको फेसबुक अकाउण्ट कसैले पासवर्ड बिनै मज्जाले खोलिदिन सक्छ भनेर ।
हो, यो सत्य कुरा हो । यस्ता केही मानिस छन् जसले जो कोहीको पनि फेसबुक अकाउण्ट बिना कुनै पासवर्ड खोलिदिन सक्छन् । आखिर को होलान् त ती मानिस ? कतै ह्याकर त होइनन् ? त्यसोभए त फेसबुक निकै असुरक्षित भयो भन्नुहोला । त्यसो पनि होइन, यी मानिसका कारण तपाईंको फेसबुक असुरक्षित होइन बरु अझै बढि सुरक्षित हुन्छ ।
उनीहरुलाई तपाईको फेसबुक खोल्न पासवर्डको जरुरत नै पर्दैन । ती कुनै ह्याकर हैनन् ती फेसबुक कम्पनीकै कर्मचारी हुन् । फेसबुकले आफ्ना केही कर्मचारीलाई यो सुविधा दिएको छ ।
वास्तवमा जो कोहीको फेसबुक अकाउण्ट बिना कुनै पासवर्ड खोल्नसक्ने क्षमता अरुमा हुने त कुरै भएन ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि आफ्ना केही कर्मचारीहरुलाई फेसबुकले यस्तो अधिकार तथा सुविधा दिएको हो । फेसबुकले के स्पष्ट गरेको छ भने कर्मचारीलाई दिइएको यस्तो सुविधाबाट कुनैपनि फेसबुक प्रयोगकर्ताको गोपनियतामा भने कुनै खालको खतरा उत्पन्न हुनेछैन । निश्चित काम पुरा गरुन्जेलका लागि फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिन लागेको हो ।
किनकी प्रयोगकर्तामाथि विश्वासघात गर्ने कर्मचारीलाई तत्कालै बर्खास्त गरिनेछ । यस्तो सुविधा सधैँभरी दिइने पनि होइन । निश्चित कर्मचारीलाई निश्चित काम पूरा गरुन्जेल सम्मका लागि मात्र दिइने हो । एजेन्सी
अचम्मकाे बालिका जति चाेट लाग्दा पनी कहिल्यै नदुख्ने
रत्ननगरको निशाश मोटर्सले ल्यायो नयाँ बाईक
कार्तिक २८, चितवन । चितवनको रत्ननगर १० वकुलहरमा रहेको निशाश मोटर्सले पल्सरको नयाँ मोटरसाईकल पल्सर एनएस एफआई एण्ड एबिएस बजारमा ल्याएको छ ।पूर्वी चितवनका लागि बजाज कम्पनीको मोटरसाईकलको आधिकारीक बिक्रेता निशाश मोटर्सले विहीवार एक कार्यक्रम गरि नयाँ मोटरसाईकल सार्वजनिक गरेको हो । निशाश मोटर्सका प्रवन्ध... जारी राख्नुहोस...
बिवाहमा साइँली औंलामा औठी लगाउनुको यस्तो छ रहस्य
कात्तिक २७ । विवाहको बेला दुलहा दुलहीले एकआपसको साइँली औंलामा औठी लगाइ दिने चलन छ । विवाह बन्धनमा बाधिएका महिलाहरूले बायाँ हातको साइँली औंला र पुरुषहरूले भने दायाँ हातको साइँली औंलामा औठी लगाउने चलन पहिलेदेखि नै चल्दै आएको मानिन्छ ।विवाहको चिन्ह स्वरुप औठी लगाइदिने चलन इशापूर्व ३००० मा शुरू भएको थिय... जारी राख्नुहोस...
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ निर्वाचनः नवराज कुँवर नेतृत्वको प्यानल घोषणा, यस्ता छन् प्रतिबद्धता
कार्तिक २६, काठमाडौं । कम्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडरेशन) को १३ औं कार्यसमिति निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी नवराज कुवँरको प्यानल घोषणा गरिएको छ । आज (मंगलबार) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच संस्थालाई गतिशील, सुधारोन्मुख र समावेशी बनाउनका लागि कार्यसमिति निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यास... जारी राख्नुहोस...
लोकप्रिय हुँदै टेलिकमको फोरजी सेवा, सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा फोरजी सिम वितरण हुँदै
कात्तिक २४, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म फोरजी सिम वितरण परिवर्तन र स्तरोन्नती गरिरहेको छ । टेलिकमले सातै प्रदेशका प्रमुख शहरहरुमा सहुलियतमा फोरजी सिम वितरण, परिवर्तन र स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत क... जारी राख्नुहोस...
ओपोले २०१९ भित्र क्वालकमद्वारा सञ्चारित डुअल–मोड ५जी स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने
कार्तिक २४, काठमाडौं । ओपोले डुअल मोड फाइभजी स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने योजनाको घोषणा गरेको छ । ओपोका चिफ ५जी साइन्टिस्ट, हेनरी ट्याङले बार्सिलोनामा आयोजित क्वालकम ५जी समित २०१९ मा गरेको घोषणा अनुसार नयाँ उपकरण, क्वालकमको डुअल मोड फाइभजीबाट सञ्चारित हुनुका साथै यसले स्ट्याण्डअलोन (एसए) र नन् (स्ट्या... जारी राख्नुहोस...
लर्ड बुद्ध एजुकेसनका विद्यार्थीले अब खल्तीमा रोजगारी पाउने
कात्तिक २२, काठमाडौं । ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ र ‘लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन’ले ई–बिजनेस र आईटी पढेका विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नशिप र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने रणनितिक साझेदारीको घोषणा गरेका छन् । सम्झौता अनुसार लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनमा अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत तथा कलेजबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूल... जारी राख्नुहोस...
त्रिभुवन विमानस्थलमा दुई बिमान ठोक्कियो
कार्तिक २२, काठमाडौँ । काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी कम्पनीका दुई बिमान ठोक्किएको छ । बिमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको बिमान र यतिको जहाज ठोक्किएको हो ।श्री एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार विराटनगरबाट आएको श्रीको जहाज पार्किङमा लैजाँदै गर्दा पार्किङमा राखेको यतिको बिमा... जारी राख्नुहोस...
कार्तिक २२ । भनिन्छ, युवतीहरु विन्दास एवं कम उमेरका केटासँग डेट गर्छन् । तर, विवाहका लागि भने आफुभन्दा बढी उमेरकै पुरुष खोज्छन् । यसमा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा पनि गाँसिएर आउँछ । युवतीहरु अपरिपक्क युवासँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न चाहँदैनन् । बरु आफुभन्दा निकै पाको उमेरकासँग उनीहरु राजी हुन्छन... जारी राख्नुहोस...
धोका, हार र चोट तिम्रा आगामी दिन राम्रा बनाइदिने बिऊ हुन्ः माल्कोम एक्स
कात्तिक २२, काठमडौँ । माल्लम लिटिल द एक्स्युमएक्स ओमहा, नेब्रास्कामा जन्मिएका ‘माल्कम एक्स’ एक चर्चित नाम हो । जसलाई विश्वले चिन्द छ । समानता र स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उनको हत्या भएको थियो । उनका केही विचारहरु अहिले पनि विश्वमा चर्चित छन् । तीमध्येका केही भनाई यस्ता छन् ।१... जारी राख्नुहोस...
अब ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ बाट विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने
कार्तिक २०, काठमाडौँ । ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ र ‘लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन’ले ई–बिजनेस र आईटी पढेका विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नशिप र रोजगारीको अवसर प्रदानगर्ने सम्बन्धि एक रणनितिक साझेदारीको घोषणा गरेका छन् ।खल्तीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मनीष माेदी र लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनका तर्फबाट अध्यक्ष प... जारी राख्नुहोस...